ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ရာသီလာစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ဘေးကင်း လုံခြုံမှု ရှိပါ့မလား? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ရာသီလာစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ဘေးကင်း လုံခြုံမှု ရှိပါ့မလား?
ရာသီလာစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ဘေးကင်း လုံခြုံမှု ရှိပါ့မလား?
အမျိုးသမီး တယောက် အနေနဲ့ ရာသီ လာချိန် ဖြစ်နေတာ တခုတည်း အတွက်နဲ့ တော့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ရှား စရာ မလို ဘူးလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ တချို့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ဆိုရင် ရာသီ လာချိန်မှာ လိင်မှု ကိစ္စပြုလုပ် ရတာက တခြား အချိန်တွေ ထက်တောင် ပို ပြီး သာယာ ကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
ဒီလို လုပ်တာကို တချို့ကလည်း မီးနီဖြတ်မောင်းတယ်လို့ တင်စားပြော တတ် ကြပါတယ်။
ရာသီလာချိန်မှာ ချောဆီ လိုအပ်ချက်လည်း နည်းပါတယ်။ လေ့လာမှု အချို့အရ မီးနီ ဖြတ်မောင်းခြင်းက ဗိုက်အောင့်ခြင်း အပါ အ၀င် အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာချိန်မှာ ခံစား ရလေ့ရှိတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ကိုလည်း သက်သာ စေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
International Headache Society က ထုတ်ဝေတဲ့ Cephalalgia ဂျာနယ်က ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု အရ လိင်ဆက်ဆံ ခြင်းကြောင့် အချို့တွေမှာ
ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာကို လျှော့ချ ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလို မလုပ်ခင် လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ (STDs)ရဲ့ အန္တရယ် နဲ့ တခြား ရောဂါ ပိုးကူးစက်နိုင်မှု အလားအလာ တွေကို နားလည် ထားရမှာ ဖြစ်သလို အဲဒီ အချိန်မျိုး မှာလည်း ကိုယ်ဝန် ရှိသွားနိုင်တယ် ဆိုတာ ကို သိထား သင့်ပါတယ်။
မီးနီဖြတ်မောင်းတော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကတော့
ရာသီလာချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံမယ် ဆိုရင် HIV လိုမျိုး လိင်ဆက်ဆံမှု ကနေ တဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင် တဲ့ အတွက် ဘေးကင်း လုံခြုံတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီး တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ် ရေး စန်တာ က ဆိုပါတယ်။
ရာသီသွေးတွေ ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ် တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အချိန်မျိုးမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရယ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ အတွက် ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုဖို့ ဆရာဝန်တွေက လေးလေး နက်နက် တိုက်တွန်း ကြပါတယ်။
ချီကာဂိုမှာရှိတဲ့ Northwestern တက္ကသိုလ်ရဲ့ Feinberg ဆေးကျောင်းက သားဖွား/မီးယပ်ပညာ တွဲဘက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Lauren Streicher က အန္တရယ်ဖြစ်စရာ အကြောင်းရင်း ၂ ခု ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကိုယ်ခန္ဓာက ထွက်တဲ့ အရည်တိုင်း က HIV သို့မဟုတ် တခြား STI(လိင်ဆက်ဆံမှု ကနေ တဆင့်ပျံ့နှံနိုင်တဲ့ ရောဂါ ပိုး) တွေ ကို သယ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရာသီလာနေချိန်မှာ သားအိမ်ခေါင်း ကလည်း အနည်းငယ်ပွင့်နေ တတ်ပါတယ်။
အဲဒါက ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျမ အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပြောချင်တာကတော့ ကာကွယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်နေတာနဲ့ အမျှ ပြသနာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ ပါပဲ။” လို့ ဒေါက်တာ Lauren Streicher က ဆိုပါတယ်။
တခြားသော ရောဂါကူးစက်ခြင်းတွေလည်း ဒီလို အချိန်မှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တယောက်ရဲ့ အင်္ဂါက pH အဆင့်ကို တလလုံးမှာ ၃ ဒသမ ၈ ကနေ ၄ ဒသမ ၅ အတွင်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားပေမယ့် ရာသီလာချိန်မှာတော့ pH အဆင့် မြင့်တက်သွားတတ်ပါ တယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သွေးက pH အဆင့် မြင့်မားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ vaginal yeast infection လို့ခေါ်တဲ့ မှိုပိုးတွေ ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန့်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
vaginal yeast infection ရှိရင် ရောဂါလက္ခဏာတွေက ရာသီရက်မတိုင်မီ တပတ်လောက်မှာ ပေါ်လာတတ်ပြီး လိင် ဆက်ဆံလိုက်ရင်တော့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရာသီလာချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံလိုက် လို့ yeast infection လျှင်လျှင်မြန်မြန် ပြန့်ပွားသွားနိုင်တယ်လို့ တိတိကျကျ ပြောနိုင်တဲ့ အထောက်အထားတော့ မရှိသေးပါ ဘူး။
“တချို့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။” လို့ Boston မှာရှိတဲ့ Massachusetts အထွေထွေရောဂါ ကုဆေးရုံက သားဖွား/မီးယပ် ဆရာဝန် ဒေါက်တာ Carrie Coleman က ပြောပါတယ်။
“ဒါပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ ဆီးအိမ်ကို ဘက်တီးရီးယားတွေရောက်သွားဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူနေတာနဲ့ ပို ပြီးတော့ သက်ဆိုင်နိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ ရာသီလာချိန် မဟုတ်ရင်လည်း ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။” လို့လည်း သူက ပြောပါ တယ်။
ရာသီလာချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မ မျိုးဥ ထွက်ချိန်နဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ ကွာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ချွင်းချက်တွေတော့ ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့ ရာသီ စက်ဝန်းက ရက်တို (၂၁ ရက်ကနေ ၂၄ ရက် အတွင်း)နေခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ရာသီလာချိန်ပြီးဆုံးခါနီးမှာ လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ် ခဲ့ရင် အမျိုးသား သုက်ပိုးက အမျိုးသမီး အင်္ဂါထဲမှာ ၅ ရက်လောက် အထိ ဆက်လက် ရှင်သန်နေနိုင်တဲ့ အတွက် ကိုယ်ဝန်ရှိ သွားနိုင်ပါတယ်။
မီးနီဖြတ်မောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ချောဆီလိုအပ်မှု နည်းပါးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေက လုံ လောက်တဲ့ ချောဆီ သဖွယ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရေကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ရေကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီတွေက ကွန်ဒုံးနဲ့လဲ တွဲပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ ၀ါရှင်တန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဂျော့ဝါရှင်တန် တက္ကသိုလ် ဆေးကျောင်းက သား ဖွား/မီးယပ် ပညာ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ James Simon က “ရေကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီတွေ၊ ဆီလီကွန်ကို အခြေခံတဲ့ ချော ဆီတွေက လိင်ကိစ္စအတွက်ရော ကွန်ဒုံး အတွက်ပါ စိတ်ချရပါတယ်။
ဆီကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီတွေ အထူးသဖြင့် တွင်းထွက်ဆီ တွေကို အခြေခံတဲ့ ချောဆီတွေက ကွန်ဒုံးကို ပျက်စီး စေနိုင်ပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
ရာသီလာချိန်အတွင်းမှာ ဗိုက်နာတာ၊ ၀မ်းနည်းသလို ခံစားရတာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျတာစတဲ့ လက္ခဏာတွေ ကြုံတွေ့ ရတယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် အကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာ Lauren Streicher က ဆိုပါတယ်။
ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ စိတ်ကျေနပ်မှု အထွတ်အထိပ်ကို ရရှိချိန်မှာ ထွက်လာတဲ့ endorphins ဟော်မုန်းက ရာသီလာချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာ တချို့ကို လျှော့ချပေး နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ရာသီလာချိန်မှာ တခြားအချိန်တွေထက်ပိုပြီးတော့ လိင်စိတ် ထက်သန်နိုးကြားနေသလိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး အများစုဟာ တင်ပါး ဆုံ ဧရိယာတ၀ိုက်မှာ ပြည့်ကြပ်နေသလို ခံစားကြရပြီးတော့ အဲဒါက လိင်စိတ်ကို တက်ကြွစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ကတော့ စိတ်ခံစားမှုက အကဲဆတ်လွန်းနေပြီး လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ သက်တောင့်သက်သာ မရှိဘဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခြေခံ အကျဆုံး အချက်ကတော့ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ၂ ဦး ၂ဘက် သက်တောင့် သက် သာရှိရေးကို သေချာအောင်လုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုယ့် အယူအဆနဲ့ကိုယ် ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့၊
လက်တွေ့ ဘာမှ မလုပ်ခင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရိုးရိုးသားသား မေးမြန်းညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို ရပါလိမ့်မယ်။” လို့ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ James Simon က ဆိုပါတယ်။
ဧရာဝတီ By : အေးမင်း
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/02/25/108489.html
Posted by Te Tee at 10:35 PM